मन्त्रीले मात्रै घुस नखाने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छः रामकुमारी झाँक्री | Kendrabindu Nepal Online News
९ आश्विन २०७६, बिहीबार ०८:३१
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रीबाटै रकम लेनदेन हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको बताएकी छिन्। नेतृ झाँक्रीले मन्त्रीले घुस खान छोडे भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बताइन्। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नारा पनि कार्यान्वयन नभएको उनको निष्कर्ष छ।
‘मन्त्रीले मात्रै उठाएको पैसा खाएन भने धेरै चिज मिलिहाल्छ’, उनले भनिन्, ‘यो त म भन्छु, मलाई कहाँ लगेर झुण्ड्याउने हो झुण्ड्याउनु । भित्तामा प्रधानमन्त्रीको स्लोगन राखेर म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न भनेर तीन लाइन लेखिएको छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नुस्।’
नेतृ झाँक्रीले भ्रष्टाचार मात्रै नियन्त्रण भएमा देशको व्यवस्था ट्रयाकमा आउने र विकास तथा समृद्धि हासिल हुनसक्ने बताइन् । साथै अर्कोपटक चुनावमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताले उम्मेदवारी दिएर घर बसे हुने उनको भनाई छ। ‘तर, खोई आज मन्त्रीले पैसा उठाउन छोडेको छ ? सरुवामा ५ हजार बुझेर हिँडेका छन् । आयोजनाको कुरै छोड्नुस्’, उनले आक्रोश पोखिन्।
नेतृ झाक्रीले मन्त्रीले घुस नखाए त्यसको असर तलसम्म पर्ने भन्दै कामहरु पनि गुणस्तरीय हुनेतर्फ जोड दिइन् । ‘मन्त्रीले घुस खाएन भने सचिवले, कर्मचारीले घुस खान्छ ? अनि विचौलियाहरु घुसको झोला बोकेर जान्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘सबैले खान्छन् र मात्रा कति हो भन्ने मलाई थाहा भएन । तर आम रुपमा मन्त्रीले घुस खान्छन्। यो रहेसम्म काम हुँदैन ।’
उनले कर्मचारी सरुवामा पनि मन्त्रीले पैसा लिने गरेको बताइन्। ‘यो आयोजनाबाट त्यो आयोजनामा लाँदा १ करोड लिने र कर्मचारी सरुवा गर्ने, अनि कसरी काम हुन्छ, यहीँ होइन समस्या । भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा’, उनले भनिन्।
घुस नखाने हो भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छः, मन्त्रीले मात्रै, रामकुमारी झाँक्री
Prevविवाहपूर्व सेक्समा सरकार कडा हुन खोज्दा इन्डोनेसियामा प्रदर्शन
चण्डेनीमण्डनका एघार सय घरधुरी पुनःनिर्माणमा कारितासको सहयोगNext